Typography ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ (အပိုင်း ၁) - IT-KOKO
Typography ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ (အပိုင်း ၁)
By အိုင်တီကိုကို on Sunday, August 21, 2011
စာမေးပွဲရှိလို့ စိတ်နဲနဲ ပူနေလို့စာတွေရေးဖြစ်နေတယ်။ ရေးဖြစ်ဖို့ကလည်း အကြောင်းက ဖန်လာတာကိုး။ G+ မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ရှယ်ထားတဲ့ လင့်ကနေ သွားဖတ်မိတယ်။ ခေါင်းစဉ်ကို တွေ့ပြီးကတည်းက ဆက်ဖတ်ချင်သွားတာ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ခေါင်းစဉ်က ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းဖြစ်တာက တစ်ကြောင်း၊ လေ့လာနေတဲ့ ကြောင်းအရာဖြစ်နေတာကတစ်ကြောင်း ဆက်ဖတ်မိသွားတယ်။ ခေါင်းစဉ်က “5 More Typography Do’s and Don’ts Everyone Should Know” ပါ။ ကျွန်တော် တော်တော်လေး ကြိုက်သွားတယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာလိုတတ်နိုင်သလို ပြန်ရေးမလို့ စဉ်းစားမိသွားလို့ပါ။ ကျွန်တော်များသောအားဖြင့် မြန်မာလိုပဲ ရေးဖြင့်တာများတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကမေးတယ် ဘာလို့မြန်မာလိုရေးတာလဲ တဲ့။ မင်းအင်္ဂလိပ်လို ရေးတာပိုကောင်းတယ်၊ ပြီးတော့ ပိုပြီးတော့လည်း စာဖတ်တဲ့သူများလာမယ်လို့ အကြံဉာဏ်လာပေးတယ်။ ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ် ကျွန်တော် မရေးဖြစ်သေးပါဘူး မြန်မာလို ရေးပြီး မြန်မာလိုပြောရတာ မြန်မာတွေအတွက် ပိုကောင်းမယ်ထင်လို့ပါ။ ကျွန်တော်က မြန်မာဖြစ်သလို မြန်မာတွေကို Target ထားထားလို့ပါ။ နောက်ပိုင်း အားရင်တော့ sub domain တစ်ခုနဲ့ English လို ဆိုဒ်တစ်ခု ရေးပါ့မယ်။
ပြောရင်းနဲ့ဘေးရောက်ကုန်ပြီ။ လိုရင်းကိုပြန်ပြောရရင် Typography ဆိုတာ စာလုံးတွေကို အလှဆင်တယ်လို့ပဲ၊ ရှင်းအောင် ပြောပါတော့မယ်။ အလှဆင်တယ်ဆိုတာက ကိုပြောချင်တဲ့ စာလုံး၊ စာပိုင်းတွေကို မြင်သာအောင်၊ အဓိပ္ပါယ် ပိုပေါ်လွင်အောင် ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတာပါ။ အဓိကအားဖြင့် Website Design မှာ Typography မပါရင်း လုံးဝကြည့်လို့ မကောင်းသလို၊ အဓိပ္ပါယ်လဲ မရှိတော့ပါဘူး။ Web Design ရဲ့ အသက်ဟာ Typography လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Typography အကြောင်းပိုသိချင်ရင်တော့ ဒီလင့် မှာ လေ့လာလို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော့ကတော့ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်လေးတွေကိုပဲ ဦးစားပေး ပြောပါတော့မယ်။
ပထမဦးဆုံး Background ကိုသတိထားရပါမယ်။ များသောအားဖြင့် စာလုံးရေးတဲ့အခါမှာ အဖြူရောင် ဒါမှမဟုတ် Solid နောက်ခံမှာဆို Typography ကပိုပြီး ပေါ်လွင်ပါတယ်။ ကြည့်လို့လည်းပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့လိုအရောင်တွေ မသုံးချင်ပဲ ဓာတ်ပုံကို နောင်ခံထားမယ်ဆို ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ? အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ။
ဒီပုံမှာဆို စာလုံးတွေကိုကောင်းကောင်းမမြင်ရပါဘူး၊ လှလည်း မလှပါဘူး၊ စာလုံးတွေကို ဘယ်လိုပဲ အလှဆင်ဆင် မရပါဘူး။ အနောက်က နောက်ခံက အရမ်းကို ရှုပ်နေလို့ပါ။ အဲ့ဒါဆို စာလုံးပေါ်ဖို့ နောက်ခံကိုပြောင်းမှာလား? တခြား ဘာတွေလုပ်လို့ရနိုင်သေးလဲ? အရိုးအရှင်းဆုံးလေး တစ်ခုလုပ်လိုက်ရင်စာလုံးတွေ ကောင်းကောင်းပေါ်လာနိုင်သလို၊ ဘားမှလည်း ပြောင်းစရာမလိုတော့ဘူး။ အောက်ကပုံကို ကြည့်လိုက်ရင် သိလောက်ပါပြီ။
ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ သိလောက်ပါပြီလို့ထင်တယ်။ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ စာသားတွေကို နောက်ခံ တစ်ခုနဲ့ပြောင်းသုံးလိုက်၊ ပြီးတော့ စာသားနောက်ခံက ရှင်းလင်းပြီး မူလပုံရဲ့ အရောင်နဲ့ ကွဲထွက်နေရပါမယ်။ ဒါဟာ stylish trick နည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ခုကိုပဲ ပြထားတာပါ။ အဓိက ကတော့ စာသားတွေကို နောက်ခံနဲ့ ခွဲထွက်နေအောင် လုပ်ထားရင် ရပါပြီ။ Color Bar, cycle နဲ့ တခြားမတူတဲ့ ပုံတစ်ခုနဲ့ လုပ်လည်းရပါတယ်။
Photo Credit : http://designshack.co.uk
အပိုင်း ၂ ဆက်ပါအုံးမည်….